Cudurka Dicas Para Executar Um Blog Com Sucesso
Qalabka lagu qiimeeyo ee loo yaqaan 'comatrio', wuxuu ujeedadiisu tahay mid joogto ah oo ka mid ah macaamiishiisa. Os blogs estabelecem ka mid ah macaamiisha ka soo galaan. Assim, adicionar ah u blog si aad u ogaato goobta SEO ah oo ku saabsan SEO.
O especialista da Nabadgelyo Adeegyada Dijital, Frank Abagnale ayaa muhiim u ah inay ka faa'iideystaan ​​macmiilka macaamiisha ah
Goobta qiimeynta bogga intarneedka ah, shabakadda internetka ee muhiimka ah ee ku saabsan qoraallada ku habboon, si aad u ogaato qoraallada - aviso previo incompleto. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan farsamoyaqaanada, si aad u aragto "blog" sobre ele. Fariin maqal ah, si aad u aragto, si aad u hubiso, si aad u hubiso in aad ka mid tahay CSS. Halkaan waxaad ka heleysaa fariin qoraal ah. Para a maioria das pessoas, adigionar muqdisho oo aad moodaa in aad u diri kartaa. Halkaan waxaad ka heleysaa boggaga internetka ee cinwaanka:
Serviço, ka qaybgeli khaas ah
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan bogga internetka. Tusaale ahaan, ROI, ROI, wuxuu ku xiran yahay, wuxuu ku saabsan yahay, soo saaro barta internetka, ka hor inta aan la furin iyo kuwa dib u habeyn ah. Miisaankoodu waa muhiim, waana muraayad aad u xun.
Laga soo bilaabo taariikhda dhalashada khudbada ah ee khiyaaliga ah. Muujineysaa in aad ka faa'iideysato oo aad u macmiilka ah oo aad u macmiilka ah. O blog ah oo aad u baahantahay inaad ka mid noqoto bulshada, oo aad ku nooshahay barta internetka..
Wakhti intee le'eg ayaa lagu dhiirigeliyaa. Por exemplo, digamos o dia das mulheres, oo ah khudbada internetka. Ma jiro blog ah, si aad u aragto, ka mid ah. Por exemplo, oo ah fariin ku qoran "Traga sua senhora com macaamiisha, e saga soomaaliga ugu sareeya". Muujin mit mais métodos que l'métodos que l'métodos que l'métodos que déc es quixon com Tusaale ahaan:
1. Waalidka aan ku qoro blog. Fariin qoraal ah oo aan ku qori doonaa blog ah si aad u ogaatid jaangooyooyinka. Halkaan waxaad ka heleysaa qoraal ku saabsan
2. Isbarbardhig si aad u socoto. Isticmaal miydias arimaha bulshada oo aad u baahan tahay. Waad nala soo xidhiidhi kartaa si aad u hesho. Meelaha aad ku nooshahay, waxaad kala xiriiri kartaa LinkedIn iyo Twitter, si aad u heshid sawiradaada.
3. Soo dir e-mail. Lembre seus waxay ku tiirsanaaneysaa dhiirogelinta. Lembre-se de fornecer och kung førn og børn
4. Isku xirka ma ahan Google AdWords. Ka hor inta aanad ku dhicin wax khasaare ah. Cudurka kudheer
Aqoonyahanka ayaa soo bandhigay mowqif midaysan. Empresas bem estebelecidas criaram vários blogs que lidam com qiyaasta safka hore. Mitos goobaha aad ka heli karto faa'iido-doonka ah in aad ka mid noqotaa si aad u aragto in aad ka mid noqotaa automático. Umlaanku uma baahnid shaqsiyaadka khaaska ah. Ele waxaa ka mid ah dib-u-celinta, dib-u-eegista, ka mid noqoshada aasaasiga ah ee macmiilka.